Akwụkwọ Ozi Nke Abụọ E Degaara Ndị Kọrịnt 1:1-24
Chineke na-akasi ndị mmadụ obi n’ọnwụnwa ọ bụla bịaara ha (3-11)
Pọl gbanwere ebe o bu n’obi ịga (12-24)
1 Mụnwa bụ́ Pọl, onye ọ bụ uche Chineke ka ọ bụrụ onyeozi Kraịst Jizọs, na Timoti+ nwanna anyị, na-edetara ọgbakọ Chineke dị na Kọrịnt akwụkwọ ozi a. Anyị na-edetakwara ya ndị nsọ niile nọ ebe niile n’Akeya.+ 2 Ka Chineke Nna anyị nakwa Onyenwe anyị Jizọs Kraịst meere unu amara, meekwa ka udo dịrị unu. 3 Ka e too Chineke, bụ́ Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst,+ na Nna na-emetere ndị mmadụ ebere,+ Chineke nke na-akasi ndị mmadụ obi n’ụdị ọnọdụ niile ha nọ.+ 4 Ọ na-akasikwa anyị obi n’ọnwụnwa niile na-abịara anyị,+ ka anyị wee nwee ike isi otú ahụ o si akasi anyị obi+ kasie ndị ụdị ọnwụnwa ọ bụla bịaara obi.+ 5 N’ihi na otú ahụ ahụhụ anyị na-ata n’ihi Kraịst hiri nne+ ka obi a na-akasi anyị n’ihi Kraịst hikwara nne. 6 Ọ bụrụ na ọnwụnwa na-abịara anyị, ọ bụ ka e nwee ike ịkasi unu obi ma zọpụta unu. Ọ bụrụkwa na a na-akasi anyị obi, ọ bụ ka e nwee ike ịkasi unu obi, ka unu nwee ike ịtachi obi mgbe unu na-ata otu ahụhụ ahụ anyị na-ata. 7 Obi siri anyị ezigbo ike na otú ahụ unu na-ata ụdị ahụhụ anyị na-ata ka a ga-akasikwa unu obi otú e si akasi anyị.+ 8 Ụmụnna anyị, anyị chọrọ ịgwa unu gbasara ahụhụ anyị tara ná mpaghara Eshia.+ Ahụhụ anyị tara ebe ahụ bịara karịa anyị, nke na anyị ejighịzi ndụ anyị n’aka.+ 9 N’eziokwu, anyị chere na anyị ga-anwụ. Ma, ihe a merenụ nyeere anyị aka ka anyị ghara ịtụkwasị onwe anyị obi, kama ka anyị tụkwasị Chineke obi,+ onye na-akpọlite ndị nwụrụ anwụ. 10 Ọ napụtara anyị n’aka ihe gaara egbu anyị. Obi sikwara anyị ike na ọ ga-anapụta anyị ma ụdị ihe a bịara anyị ọzọ.+ 11 Unu nwekwara ike inyere anyị aka na-arịọ Chineke ka o nyere anyị aka.+ N’ihi na ọ bụrụ na ọtụtụ ndị arịọ Chineke arịrịọ, ọ ga-anụ ya ma nyere anyị aka. Ọtụtụ ndị ga-ejikwa maka ya na-ekele Chineke.+ 12 Akọnuche anyị dị ọcha n’ihi na, mgbe anyị na ndị ụwa nọ, nakwa karịchaa, mgbe anyị na unu nọ, anyị kpara àgwà dị nsọ, nweekwa obi dị ọcha nke si n’aka Chineke. Ma, ọ bụghị amamihe ụwa mere anyị ji ebi ndụ otú a,+ kama ọ bụ amara Chineke meere anyị. Ọ bụ ihe ndị a ka anyị ji anya isi. 13 N’eziokwu, anyị na-edetara unu akwụkwọ ozi ga-adịrị unu mfe ọgụgụ,* nke unu ga-aghọtakwa. Enwekwara m olileanya na unu ga na-aghọtakwu ihe ndị a nke ọma,* 14 otú ahụ ụfọdụ n’ime unu ghọtarala ya. N’eziokwu, ụfọdụ n’ime unu aghọtala na unu ga-eji anyị na-anya isi. Anyị ga-ejikwa unu nyaa isi n’ụbọchị Onyenwe anyị Jizọs. 15 Ebe ọ bụ na obi siri m ike n’ihe a m kwuru, ebu m n’obi ibu ụzọ bịa hụ unu, ka unu nwee ike ịṅụrị ọṅụ nke ugboro abụọ.* 16 N’ihi na ebu m n’obi na m ga-abịa hụ unu ma m gawa Masedonia, hụkwa unu ọzọ ma m si Masedonia lọtawa, unu edupụzie m ma m gawa Judia.+ 17 Mgbe m na-eche gbasara ihe a, eleghị m ya anya ka ihe na-adịghị mkpa. Ihe m nọkwa na-eche abụghị ka m mee uche m, otú ọ ga-abụ, m sị, “ee,” m nọtụ, mụ asị, “mba.” 18 Otú ahụ e kwesịrị ịtụkwasị Chineke obi ka e kwesịkwara ịtụkwasị anyịnwa obi. Anyị agaghị asị, “ee,” anyị nọtụ, anyị asị, “mba.” 19 N’ihi na Ọkpara Chineke, bụ́ Jizọs Kraịst, onye mụ na Silvenọs* na Timoti+ ziri unu ozi ọma gbasara ya, anaghị asị “ee,” ya nọtụ, ya asị, “mba.” Kama, “ee” ọ bụla o kwuru na-abụgide “ee.” 20 N’ihi na n’aka ya ka nkwa niile Chineke kwere si mezuo.*+ N’ihi ya, anyị na-esikwa n’aha ya asị Chineke “Amen,”+ nke na-eme ka e si n’aka anyị na-eto Chineke. 21 Chineke kwere nkwa na anyị na unu ga-abụ ndị nke Kraịst, ọ bụkwa ya tere anyị mmanụ.+ 22 Ọ kaakwala anyị akara ya.+ Akara ahụ bụ mmụọ nsọ+ dị n’ime anyị,* nke na-eme ka obi sie anyị ike na anyị ga-enweta ngọzi ndị ga-abịa. 23 Abịabeghị m Kọrịnt n’ihi na achọghị m ka e nwee ihe ga-ewute unu. Chineke bụkwa onye akaebe m* n’okwu a. 24 Ihe m na-ekwu abụghị na ọ bụ anyị na-eme ka unu nwee okwukwe.+ Kama, anyị bụ ndị ọrụ ibe unu, ndị na-eme ka unu na-aṅụrị ọṅụ, n’ihi na ọ bụ okwukwe unu mere unu ji guzosie ike.
^ O nwere ike ịbụ, “akwụkwọ ozi gbasara ihe unu ma nke ọma.”
^ Na Grik, “unu ga na-aghọtakwu ihe ndị a ruo ọgwụgwụ.”
^ O nwere ike ịbụ, “ka unu wee rite uru ugboro abụọ.”
^ Na Grik, “si bụrụ ‘ee.’”
^ Na Grik, “n’ime obi anyị.”